परिचय सिद्ध गर्न संघर्षरत सिद्धान्त ! | Hamro Khelkud
घाइते राशिदले पहिलो खेल गुमाउने
रिचार्लीसनको गोलमा एभर्टनको जित
भिनिसियसको गोलमा रियल हारबाट जोगियो
पन्जाबको जितमा कप्तान किरण ‘म्यान अफ द म्याच’
पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको पुरस्कार राशिमा वृद्धि
दीपक र सोम सेमिफाइनलमा
परिचय सिद्ध गर्न संघर्षरत सिद्धान्त !
जब जब नेपाली क्रिकेटमा सिद्धान्त लोहनीको नाम आउँछ, त्यससँगै सबैको मानसपटलमा त्यहि हेलिकप्टर सट चल्छ । सिद्धान्तको पर्याय नै बनेको हेलिकप्टर सट उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट सन् २०१५ आईसीसी टि–२० विश्वकप छनोट डेब्यूमै जर्सिविरुद्ध प्रहार गरेका थिए । त्यसै सटले उनलाई आम समर्थकमाझ चर्चा दिलायो ।
त्यसबेला २० वर्षीय सिद्धान्तले आक्रामक इनिङ खेल्दै धेरैको मन जितेका थिए । उक्त प्रतियोगिता खेल्नुअघि राष्ट्रिय प्रतियोगितामा १९ बलमा नै अर्धशतक बनाएपछि उनले टोलीमा स्थान बनाएका थिए । उनको प्रदर्शनले नेपाली टोलीले नयाँ फिनिसर पाएको अनुमान लगाइएको थियो । युवा भएकाले उनले अझै सुधार गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय टोलीमा मौका पाएपछि सुखद सुरुवात गरेका सिद्धान्त अहिले राष्ट्रिय टोलीमा छैनन् । यसपटक त प्रारम्भिक चरणमा पनि उनको नाम अटेन । घरेलु क्रिकेटमा सामान्य रन जोड्न संघर्षरत सिद्धान्तको ब्याटबाट ठूलो रन नबनेको लामो समय भएको छ ।
विशेषत: फ्रेन्चाइज लिगमा उनीबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । उनीमाथि चर्चा अनुसार टोलीहरुले भाउ पनि लगाउने गरेका छन् । तर प्रदर्शन भने निराशाजनक रहेको छ । केहि महिनाअघि मात्र सम्पन्न एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा त उनले पहिलो रोजाइमा पर्न पनि संघर्ष गर्नुपर्यो । उनले अवसर पाएको अवस्थामा पनि रन बटुल्न नसक्दा अहिले राष्ट्रिय टोलीमा पर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
विराटनगरबाट क्रिकेट यात्रा थालेका उनले उमेर समुह हुँदै २०७२ मा राष्ट्रिय टिममा परेका थिए । विश्वकप छनोट अघि एक दिवसिय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा १९ बलमै अर्धशतक प्रहार गरेपछि उनलाई सिनियर टोलीमा स्थान बनाउन सहज बनेको थियो । जर्सीविरुद्ध डेब्यू गर्दै १६ बलमा समान २ छक्का र चौका प्रहार गरि २७ रन जोडे । नेपालका लागि उक्त खेलमा सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडी उनी नै थिए । लोहनीले २० औं ओभरको पहिलोे बलमा हवकिंग्स केयलाई हेलिकप्टर शट प्रहार गर्दै छक्का हानेपछि धेरैले उनलाई भारतीय पुर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीसँग पनि तुलना गरेका थिए ।
दूर्भाग्य नै भन्नुपर्छ जर्सीसँगको खेलपछि लोहनीले राष्ट्रिय टिममा पुन मौका पाएनन् । केहि अगाडी बन्द प्रशिक्षण हुँदै वैकल्पिक सूचिमा रहँदै आएका सिद्धान्तको नाम अहिले सम्भावित सुचिमा पनि अटाउँदैन । सन् २०१५ विश्वकप छनोटमा खराब प्रर्दशनका कारण त्यसयता नेपालले तीन वर्षसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० खेल खेल्न पाएन । गत जुलाईमा नेदरल्यान्ड र एमसीसीसँग लर्ड्समा टी–२० खेल्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा पुनरागमन गरेको थियो ।
खेलाडी लयमा रहेको बेलामा मौका पाउँदा प्रदर्शन पनि राम्रो हुन्छ । निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरेपछि टोलीमा स्थान बलियो हुन्छ र प्रदर्शनमा पनि सुधार हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा समग्र टोली र स्वयं उक्त खेलाडीलाई हुन्छ । तर लयमा रहँदा मौका नपाउने अथवा खेल नै नहुँदा मनोबल कमजोर हुँदै जान्छ र लामो समयपछि सोहि किसिमको प्रदर्शन गर्न कठिन हुन्छ । यसले टोलीमा नियमित परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र खेलाडी तथा टोली दुवैले असर पर्छ ।
फिनिसरको भूमिकामा राष्ट्रिय टोलीमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त उल्लेखि समस्याका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । पछिल्लो समय घरेलु क्रिकेटमा लोहनीले आफ्नो लय गुमाएका छन् । तर उनी आफैं भने यो मान्न तयार छैनन् । उनी लामो इनिङ खेल्न नपाएको कारण आफ्नो प्रतिभा देखाउन नपाएको गुनासो पोख्छन् । ‘ अन्तिम दुई तीन ओभरमा आएर हरेक बल प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै बल हान्न सक्ने पनि हुँदैन । जसको कारण मैले विकेट गुमाइरहेको छु । म लयमा नभएको होइन । मैले लामो इनिङ खेल्न नपाएको हो, ‘ सिद्धान्त बताउँछन् ।
पछिल्लो समय घरेलु लिगमा उनको प्रर्दशनबाट भने सिद्धान्त आफैं पनि खुसी छैनन् । ‘हो, पछिलो समय मैले सोचेअनुसार प्रर्दशन गर्न सकिरहेको छैन । म राम्रो गर्न खोजिरहेको छु । तर पनि रन बनिरहेको छैन, ‘ लोहनीले भने ।
टी२० मा फिनिसरको संभावना
टी–२० क्रिकेटमा फिनिसिङमा ठूलो महत्त्व हुन्छ । एकै ओभरमा खेलको रुप परिवर्तन हुन सक्छ । नेपाली क्रिकेटले लामो समयदेखि ब्याटिङको समस्या झेल्दै आएको छ । विशेषत: ओपनिङ र फिनिसिङको समस्याले नेपाली टोलीले नतिजा हात पार्न सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा पनि नेपाली टोली राम्रो फिनिसर र ओपनर जोडीको खोजीमा छ । यसका लागि विभिन्न विकल्पहरु लिएर प्रयोग गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
पछिल्लो समय फिनिसरको भूमिकामा दावेदार देखिएका विनोद भण्डारीको प्रर्दशन राम्रो हुन सकेको छैन । खराब लयकै कारण उनले एमसीसी र नेदरल्यान्डसँगको टी–२० सिरीजमा स्थान बनाउन सकेनन् । यूएईविरुद्ध अर्को सातादेखि सुरु हुने सिरिजका लागि युवा खेलाडीलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ । फ्रेन्चाइज लिगहरुमा सम्भावना देखाएका भीम सार्की, सन्दीप जोरा र कुशल मल्ल टोलीमा छन् । पवन सर्राफ र विनोद भण्डारी पनि त्यो भूमिकाको लागि दावेदारी दिन सक्छन् । तर यी सबै प्रयोग हुन् । अवसर पाएको खण्डमा उनीहरुले गर्ने प्रदर्शनले नै कसले बाजी मार्च भन्ने निर्क्यौल हुन्छ ।
सिद्धान्त आफैं पनि छिट्टै राष्ट्रिय टोलीमा फर्कने प्रयासमा रहेको बताउँछन् । फिनिसिरको रुपमा लोहनी टोलीमा स्थान बनाउन चाहन्छन् । उनले टी–२० भन्दापनि वान-डे मा अझै राम्रो प्रर्दशन गर्न सक्ने बताउँछन् । सिद्धान्तले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गर्ने आधार बनाउनकै लागि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब छाडेर प्रदेश १ बाट खेल्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘ मैले विगतमा यु–१९, राष्ट्रिय एकदिवसिय प्रतियोगिता, प्रधानमन्त्री कपमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थिएँ । टी–२० मात्र होइन वान डे मा पनि म राम्रो गर्न सक्छु । अझै राम्रो गर्न खोजि रहेको छु । त्यसैले म अहिले पुलिस छाडेर प्रदेश १ बाट एक दिवसिय खेल खेली रहेको छु,’ उनले थपे, ‘पुलिसबाट खेल्दा म राष्ट्रिय खेलाडीको छाँयामा परे । ८,९ नम्बरमा आएर ठूलो स्कोर बनाउन सकिदैन । त्यसैले पुलिस छाडेर प्रदेशका लागि खेल्ने निर्णय लिएको हुँ ।’
लोहनीलाई राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन सहज अवस्था भने छैन । पछिल्लो समय उमेर समुह र घरेलु लिगमा सिद्धान्त भन्दा कम उमेरका सन्दीप जोरा, भिम सार्की, रोहितकुमार पौडेल, कुशल मल्लजस्ता ठूलो सम्भावना र राम्रो छाप छोडेका छन् । रोहितले राष्ट्रिय टिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाललाई वान डे मान्यता दिलाउन महत्वपूर्ण प्रर्दशन गरेका थिए । सिद्धान्तले लगातर खराब प्रर्दशन गर्दा उमेर समूह तथा घरेलु लिगमा शानदार प्रर्दशन गरिरहेका युवा खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
जनवरी २५ देखी नेपालले युएईसँग समान तीन ओडीआई र टी–२० सिरीज खेल्दै छ । यसअघि बन्द प्रशिक्षणको वैकल्पिक सुचिमा रहेका लोहनी यस पटक प्रारम्भिक सुचिमा नपरेकोमा आश्चर्यव्यक्त गरे । ‘मिहिनेत गरिरहेको छु । राम्रो प्रर्दशन गर्न खोजिरहेको छु तर पनि सोचे जस्तो प्रर्दशन हुन सकेको छैन । म व्यक्तिगत अभ्यासको लागि दिल्ली पनि गएको थिए । तर बिरामी भएर २५ दिनमै फर्किए,’ उनले भने, ‘मेरो अभ्यास अझै पुगेको छैन कि जस्तो पनि लाग्छ । २४ वर्ष लागिसकें, अब पनि राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन सकींन भने जुन समय राम्रो गर्नु पर्ने हो त्यो पाउदैन भन्ने चिन्ता छ,’ लोहनीले भने ।
सिद्धान्तमा प्रतिभा देखेर तत्कालिन प्रशिक्षक पुबुदु दसानिकेले सन् २०१५ मा जर्सिविरुद्ध डेब्यु गराएका थिए । जुन विश्वासमा उनी खरो उत्रिए । निकै दबाबको खेलमा उनले आफूलाई प्रमाणित पनि गरे । अब उनले फेरी एकपटक राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाउने हो भने आफ्नो स्तर सिद्ध पार्नुपर्ने छ । सिद्धान्तको स्तरमा कुनै प्रश्न छैन, पछिल्लो समय उनले प्रदर्शन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय टोलीमा पर्न नसकेका हुन् ।
सिद्धान्तको लागि अब टोलीमा फर्कने आधार घरेलु क्रिकेट नै हो । फ्रेन्चाइज लिगमा राम्रो छाप बसाउन सके उनले राष्ट्र्रिया टोलीमा पुनरागमन गर्ने सम्भावना रहन्छ । अबको तीन सातामा तेस्रो रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल-३) सुरु हुँदैछ । उक्त प्रतियोगितामा सिद्धान्तले महेन्द्रनगर युनाइटेडको जर्सी लगाउनेछन् । शरद भेषावकरको कप्तानीमा युवा खेलाडीले राम्रो छाप बसाउँदै आएका छन् । सिद्धान्तको लागि यो राम्रो अवसर हुनेछ ।
नेपाली टोली आगामी ४ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा व्यस्त रहनेछ । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तले अब आउने डीपीएलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न थप जरुरि छ। यूएईविरद्ध सिरिजमा गरिने प्रयोग सफल भएको खण्डमा सिद्धान्तले डीपीएलमा राम्रो प्रदर्शन गरेपनि उनले मौका नपाउने स्थिति हुन सक्छ । यद्यपी आफ्नो स्तरअनुसार प्रदर्शन गर्ने हो भने राष्ट्रिय टोलीमा उनको लागि अवसर भने अझै पनि खुला नै देखिन्छ ।
मंगलबार, फागुन १८, २०७७
बागमती प्रदेशस्तरीय गणेशमान सिंह स्मृति बक्सिङ सुरु
ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेट प्रतियोगता हुने!
गजेन्द्रको घातक बलिङमा हिमालयन ह्वाइटहाउसको सहज जित
रियल म्याड्रिडलाई सोसिडाडको चुनौती